Mamela ny fametrahana extension Gnome amin'ny Ubuntu 18.04 LTS | Ubunlog
Alefaso ny fametrahana extension Gnome amin'ny Ubuntu 18.04 LTS
Na dia nanapa-kevitra aza ry zalahy tao amin'ny Canonical avelao ny Unity amin'ny fanaovana ny switch mankany Gnome Shell hatramin'ny ny kinova Ubuntu 17.10 Artful Aardvark teo aloha ary lasa ny fotoana mbola tsy nanao zavatra tsara ry zareo Eny, nisy teboka iray manan-danja hadino ary tena manaitra ahy izany.
Ny zava-misy amin'ny fanatanterahana fifindra-monina avy amin'ny tontolo iray mankany amin'ny iray hafa ary famoahana izany ho an'ny besinimaro dia mitaky andiam-pitsapana maro ary famoahana beta hahafantarana ireo olana rehetra nateraky ny fampiasana mahazatra ireo alohan'ny hamoahana kinova miorina.
fa adinonao ny manatanteraka ny fampidirana tena ilaina tokoa mamela betsaka ny irina.
Andro vitsivitsy monja taorian'ny nanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny Ubuntu 18.04 nandritra io vanim-potoana io dia nahavita ny fametrahana sy ny fikirakira anao ianao handefasana ny rafitrao, mety nahatsikaritra ianao raha mila manandrana ianao ny fametrahana fanitarana gnome dia tsy ho vita mora foana.
Ary izany dia mitranga satria ny rafitra dia tsy mandefa asa "mampifandray" manokana eo anelanelan'ny fanitarana sy ny tontolon'ny birao.
Izany no antony Tokony hametraka ny tanantsika isika mba hahafahantsika mametraka ny extension Gnome ao amin'ny rafitray.
1 Ahoana ny fametrahana ny extension Gnome Shell amin'ny Ubuntu 18.04 LTS?
2 Ahoana ny fomba hitantanana ny fanitarana Gnome Shell ao amin'ny Ubuntu 18.04?
2.1 Mametraka ny fonosana fanitarana Gnome avy amin'ny repositories Ubuntu
Ahoana ny fametrahana ny extension Gnome Shell amin'ny Ubuntu 18.04 LTS?
Raha te hankafy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ireo fanitarana Gnome Shell amin'ny rafitrao ianao, tsy maintsy mametraka fonosana fanampiny izay hiasa ho tetezana isika eo anelanelan'ny tranokala fanitarana Gnome sy ny rafitray.
Ho an'ity Tsy maintsy manokatra terminal isika ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Vita ny fametrahana Ity fanampiny ity dia hiasa ao amin'ny Google Chrome, Firefox na Opera, ary koa ny mpitety tranonkala mifototra amin'ireo teo aloha na izay manohana ny rafitry ny add-on avy amin'izy ireo.
Ankehitriny ny dingana manaraka dia ny mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny fanitarana Gnome ary Azontsika atao ny mahita fizarana iray izay milaza amintsika fa mila famenony isika mba hahafahantsika mametraka ireo extension mivantana avy amin'ny mpizaha.
Na raha tianao:
Ho an'ny Google Chrome, Chromium, ary Vivaldi, apetraho amin'ny alàlan'ny ny plugin Chrome Web Store.
Ao amin'ny Firefox, apetraho ny add-on avy amin'ny tranokala Mozilla Addons.
Ho an'ny Opera dia apetraho amin'ny tranokala Opera Addons.
Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra hametrahana ny add-on dia hampidirina ao amin'ny tranokalanay izany, mety angatahina ianao hamerina ny tranokalaninao, hanidy azy fotsiny ary hanokatra azy indray.
Vantany vao vita izany dia miverina amin'ny pejy ofisialin'ny fanitarana Gnome isika, hitantsika fa nanjavona ilay hafatra ary misy fisehoana hisehoana ahafahantsika mametraka na manala ireo fanitarana Gnome Shell avy amin'ny mpitety.
Ahoana ny fomba hitantanana ny fanitarana Gnome Shell ao amin'ny Ubuntu 18.04?
Mba hifehezana ireo avy amin'ny rafitray manana fitaovana isika efa mihoatra ny iray no mahalala, izany no lazaiko Gnome Tweak Tool izay misy pejy iray hitantanana ireo fanitarana Gnome Shell napetraka.
Mametraka azy Tokony ho izy ihany no mitady azy io ho 'Gnome Tweaks'ao amin'ny rindrambaiko Ubuntu ary apetraho.
dia ny fitaovana ihany no tokony hataon'izy ireo fikolokoloana sy fitantanana ny fanitarana Gnome Shell napetraka ao amin'ny kiheba "Extensions".
Mametraka ny fonosana fanitarana Gnome avy amin'ny repositories Ubuntu
Ubuntu, ary koa fizarana Linux maro hafa izay mety manana kinova na mampiasa ny Gnome Shell ho toy ny tontolon'ny birao matetika izy ireo dia manome fonosana misy karazana extension extension Gnome, na inona na inona kinovan'ny tontolo iainana ampiasain'izy ireo, ity fonosana ity dia mifanaraka tanteraka aminy.
Amin'ny ankapobeny dia eo anelanelan'ny 8 ka hatramin'ny 10 ny fanitarana hapetraka ao amin'ny rafitra, noho izany Tsy mila manokatra terminal fotsiny isika ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Raha vantany vao vita izany, dia afaka mandeha any amin'ny tranonkala ofisialin'ny fanitarana na avy amin'ny Gnome Tweak Tool izahay ary afaka mahita ireo fanitarana napetraka vaovao vonona hampavitrika amin'ny rafitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » GNOME » Alefaso ny fametrahana extension Gnome amin'ny Ubuntu 18.04 LTS
Jorge Ariel Utello dia hoy izy:
Al fart ny akorany dia tsy tompon-tany, tsy mandray azy ireo?
Valiny tamin'i Jorge Ariel Utello
Rehefa avy nitendry ny baiko tao amin'ny terminal ianao, nampidina tsara ny atiny rehetra, dia mbola tsy mandeha ...
Manana safidy hafa ve ianao azoko atao ny manandrana mampiditra ireo fanitarana ireo amin'ny solosainako?
Raha nametraka ny fampidirana ianao dia ampy ny manana ny add-on ho an'ny mpitety tranonao ary io no hany fomba, dia tsy tokony hahomby.
Iza amin'ireo browser no anaovanao izany?
Lubuntu 18.10 dia hanana LXQT ho biraonao default
Ampidiro ny tontolon'ny birao Unity amin'ny Ubuntu 18.04 LTS